Ardaygu niqaab iskuulka waa ku qaadan karaa | Somaliska
Labo sano ka hor ayaa gabar Muslimad ah iskuul ku yaala magaalada Stockholm looga cayriyay maadaama ay xiran jirtay niqaabka ama inshareerka, gabadhaas ayaa dacwo u gudbisay Wakiilka arimaha Sinaanshaha (Diskriminerings- ombudsmannen – DO). walow ay arintaan waqti dheer qaadatay ayaa wakiilku waxa uu go'aamiyay hada in ay qalad ahayd in gabadhaas iskuulka looga cayriyo niqaab dartiis oo ay ka soo horjeedo sharciga Sweden. "Ka dib baaritaankeena in arday looga cayriyay niqaab kaliya iskuulka ayadoon la eegin arimaha qaaska ee la xiriira ardayga , waxay ka soo horjeedaa sharciga Sweden" ayay tiri Katri Lina oo ah Wakiilka arimaha Sinaanshaha. Gabadha laga eryay iskuulka ayaa markii dambe loo ogolaaday iskuulka in ay sii wadato ayadoo hada dhamaysay oo buundooyin fiican ku baastay. Katri Lina ayaa sidoo kale dhaliishay fikrada ay dad badan oo Swedish ka aaminsanyihiin niqaabka oo ay u arkaan mid ragu ku qasbaan dumarkooda ayada oo sheegtay in aan sidaas loo yareysay niqaabka balse arinta lagu saleeyo shaqsi kasta iyo sababta uu u qaatay. Go'aanka Wakiilka Sinaanshaha ayaa macnaheedu yahay in hada ka dib ay waajib ku tahay iskuulada in aysan iska eryi karin ardayga balse ay baaritaan ku sameeyaan xaaladaha la dariska ah , waxa uu ardaygu barto , layskuna dayo in xal kale loo helo ayadoon ardayga iskuulka laga saarin.
Labo sano ka hor ayaa gabar Muslimad ah iskuul ku yaala magaalada Stockholm looga cayriyay maadaama ay xiran jirtay niqaabka ama inshareerka, gabadhaas ayaa dacwo u gudbisay Wakiilka arimaha Sinaanshaha (Diskriminerings-
ombudsmannen – DO).
walow ay arintaan waqti dheer qaadatay ayaa wakiilku waxa uu go’aamiyay hada in ay qalad ahayd in gabadhaas iskuulka looga cayriyo niqaab dartiis oo ay ka soo horjeedo sharciga Sweden.
“Ka dib baaritaankeena in arday looga cayriyay niqaab kaliya iskuulka ayadoon la eegin arimaha qaaska ee la xiriira ardayga , waxay ka soo horjeedaa sharciga Sweden” ayay tiri Katri Lina oo ah Wakiilka arimaha Sinaanshaha.
Gabadha laga eryay iskuulka ayaa markii dambe loo ogolaaday iskuulka in ay sii wadato ayadoo hada dhamaysay oo buundooyin fiican ku baastay.
Katri Lina ayaa sidoo kale dhaliishay fikrada ay dad badan oo Swedish ka aaminsanyihiin niqaabka oo ay u arkaan mid ragu ku qasbaan dumarkooda ayada oo sheegtay in aan sidaas loo yareysay niqaabka balse arinta lagu saleeyo shaqsi kasta iyo sababta uu u qaatay.
Go’aanka Wakiilka Sinaanshaha ayaa macnaheedu yahay in hada ka dib ay waajib ku tahay iskuulada in aysan iska eryi karin ardayga balse ay baaritaan ku sameeyaan xaaladaha la dariska ah , waxa uu ardaygu barto , layskuna dayo in xal kale loo helo ayadoon ardayga iskuulka laga saarin.